737 မက်စ်အော်တိုဘရိတ်2လအတွင်း4days ago #1809
737 max ကိုအပေါ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကချစ်ခြင်းမေတ္တာ။ ပြissueနာတစ်ခုရှိပါသလား။ တစ်ယောက်ယောက်ကကူညီနိုင်မလားလေယာဉ်ပြေးလမ်းပေါ်အပြည့်အဝရပ်တန့်သွားသည်အထိအလိုအလျောက်စက်ဘီးများဆင်းသက်ပြီးသည့်နောက်မှလွှတ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ??? သင်နှိပ်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ်သင်၏ joystick မှဘရိတ်များကိုအသုံးပြုပါ။ ငါတစ်နေရာရာကိုလွဲချော်ဤအဘို့ပြင်ဆင်ချက်ရှိပါသလား ငါတစ်ယောက်ယောက်ပြင်ဆင်မှုရှိရင်ဖိုင်တည်းဖြတ်တာကိုကောင်းတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်မှု - ဖြင့် ဂျူလီ.
737 မက်စ်အော်တိုဘရိတ်2လအတွင်း3days ago #1810
အကြှနျုပျ၏ဖြေရှင်းချက်ဆင်းသက်မတိုင်မီသူတို့ကိုမှာအားလုံးသတ်မှတ်ထားဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ တူညီသောပြSameနာ။ အဲဒါကိုသုံးနေစဉ်၊ ငါဆင်းသက်ပြီးတဲ့အခါမှာအရာအားလုံးနဲ့အရာအားလုံးကိုကြိုးစားပြီးကြိုးစားခဲ့ဖူးပေမယ့်အတူတူပဲ။
Edit: မည်သူမဆိုတစ် ဦး လေယာဉ်တစ်စင်းနှာခေါင်းတက်သည့်အပေါ်ရုံ 80 ကီလိုမီတာမှာချွတ်ယူရှိရာပြaနာတစ်ခုအဘို့အဖြေရှိသလား?